Fiatrehana ny "Coronavirus" :: Manentana ny Malagasy hanaraka ny fepetra rehetra i Bôlida • AoRaha
Fanatanjahantena • Samihafa
Fiatrehana ny « Coronavirus » Manentana ny Malagasy hanaraka ny fepetra rehetra i Bôlida
Mamboraka ny fiainany miatrika ny fihibohana any Frantsa i Nomenjanahary Lalaina na i Bôlida, mpilalaon’ny ekipam-pirenena Malagasy na ny Barean’ i Madagasikara mila ravinahitra ao amin’ny Paris FC. Ilaina ny fanarahana ny toromarika rehetra mba hialana amin’ny fiparitahan’ny valan’aretina « Coronavirus », hoy izy.
“Tsy mora ho anay mpilalao baolina matihanina ny toe-java-misy. Eo ihany ny fijanonana an-trano fa ny fikarakarana sy fanarahamaso ny ankizy no tena henjana. Soa ihany fa misy zaridaina lehibebe ato aminay ahafahan’izy ireo milalao”, araka ny fitantaran’ ity mpilalao malagasy ity. Milaza ny tsy mivoaka mihitsy izy ho fiarovana amin’ny fahazoana ny valan’aretina.
Isan’ireo tena manaraka tsy tapaka ny vaovao aty Madagasikara i Bôlida. “Mifampiantso matetika amin’ ny fianakaviana aho. Tena mandripaka sy mahafaty io fa aza atao kinanga . Manainga ny vahoaka malagasy tsivakivolo aho , hanaraka tsara ny toromarika rehetra, izay omen’ny fanjakana satria vetivety ny tsimok’aretina dia miparitaka, ary tsy ho mora ny mifehy azy”, hoy ny tenin’i Bôlida.
Miezaka ny mitaiza vatana amin’ny alalan’ny fanatanjahantena hatrany anefa izy na eo aza ny fihibohana atao ny. “Mampiasa irony bisikileta voizina ato an-trano irony sady manamafy ny herimbatako aho. Mifandray ihany koa amin’ireo mpilalao rehetra”, raha ny fitantarany.
Hetsika iraisam-pirenena :: Hihemotra amin’ny taona 2021 ny lalao olimpika
Tsaky tsiky manala hamohamo